दोस्रो दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास) – RabinsXP Blog
“नीला † आज हामी नारायणघाट हाम्रो खेतीमा पुगेर आऊ“ । तिमीलाई पनि देखाइदिन्छु । धेरै दिन भयो म नगएको । यात्रा रमाइलो लाग्छ मलाई≤ अझ साथमा तिमी भए पछि झनै रमाइलो हुन्छ ।” बिहान सबेरै आभासले नीलालाई भनेको थियो । वीरगन्ज जा“दा बसबाट देखेको भए पनि नीलाका लागि नारायणघाट त्यत्ति परिचित ठाउ“ थिएन । नीलाले ब्याङ्कबाट तीन दिनको बिदा लिएका कारण उसलाई अरू दुई दिनसम्म केही चिन्ता थिएन । “मेरो भोलिसम्म मात्र बिदा छ ।” नीलाले आभासलाई आÏनो बिदाबारे पुनः जानकारी गराएकी थिई । “मलाई थाहा छ≤ त्यसैले त आजको रात त्यहा“ बस्ने, भोलि बेलुकी यहा“ आइहालिन्छ । तिम्रो अड्ढिस पर्सिदेखि जानुपर्ने हैन ?” आभासले सोधेको थियो ।
बाटाका लागि चाहिने सरसामानहरू आभास आड्ढै“ले नोकरहरूको सहयोगमा मोटरमा राखेको थियो । उसले सबै तयारी गरिसक्ता बल्लतल्ल नीला आपूm तयार भएकी थिई । बिहानको खाना अलि छिट्टै खाएर उनीहरू नारायणघाटका लागि हि“डेका थिए ।
“नीला † तिमी यो पेन्टिङ्स“गै उभिऊ त म तिम्रो ड्ढोटो लिन्छु ।” आभासले उसको बाबुका पेन्टिङहरू टा“गिएको हलका अघि उनीहरू पुग्नासाथ टक्क उभिएर भनेको थियो । आभास नीलाको ड्ढोटो खिच्न एकदमै तयार थियो । आभासका हातमा क्यामेरा भएको कुरा पनि नीलाले चाहि“ भरखरै मात्र याद गरेकी थिई । आपूm उभिएको भित्तातिर ड्ढर्केर नीलाले हेरी । त्यहा“ एउटा अमूर्त पेन्टिङ थियो । त्यो पेन्टिङ राम्रो थियो । पेन्टिङ अमूर्त भएको कारण नीला र आभास दुवैले आआÏना कल्पनाका दृश्यहरू त्यहा“ देख्थे । नीला त्यो पेन्टिङमा पहाडका थुम्काहरू र रुखहरू देख्थी भने आभास त्यस पेन्टिङमा बिरालाहरूको झुन्ड देख्थ्यो । आभासको मन परेको पेन्टिङमध्येको एउटा विशेष पेन्टिङ थियो त्यो । त्यसैले नीलालाई त्यस पेन्टिङस“ग ड्ढोटो खिच्नुको कुनै तुक नभए पनि आभासको खुसीका लागि ऊ पेन्टिङस“गै उभिई र आभासले आÏनो रुचिअनुरूप नीलाको तस्बिर क्यामेरामा कैद गरेको थियो ।
त्यसो त आभासले नीलाको यो पहिलो तस्बिर खिचेको पनि होइन । आभासलाई हातमा क्यामेरा भएपछि ड्ढोटो खिचिरहन मनलाग्दो रहेछ । उसले यसअघि अर्थात् नीला र आभासको घनिष्ठता भए यता नीलाका सयौ“ तस्बिरहरू खिचेको थियो । “किन यतिविघ्न तस्बिर खिच्छौ । के काम यत्तिका तस्बिर ? एकैखाले यत्तिका तस्बिरको अर्थ नै के छ र †” नीलाले एकदुईपटक नजानि“दो विरोध पनि जनाएकी थिई । “तिमीलाई थाहै छैन नीला † यो संसार परिवर्तनशील छ । यहा“ हरेक पलपलमा परिवर्तन हुन्छ । तिमी भन्छ्यौ एकै किसिमका तस्बिर खिचेको भनेर, यो कुरा सम्भव नै छैन । एउटा ड्ढोटो खिचिसक्ता नै तिमीमा कति ठूलो परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । अर्को कुरा मलाई लाग्छ मेरा हातमा क्यामेरा होस् अनि म तिम्रो तस्बिर खिचिरहू“ ।” कविजस्तो भएर कवितामा बोलेको थियो ऊ । हुन पनि कहिले नीलाको टाउकाको मात्रै, कहिले उसको ऑखालाई महइभ्व दिएर, कहिले कपाललाई महइभ्व दिएर, कहिले नीलाले मोटर साइकिल हा“केको भावमा, कहिले मोटर, कहिले ट्रक र घोडा हा“केका समेत तस्बिरहरू आभासले खिचेको थियो । एउटै मानिसका यत्ति धैरै तस्बिर पनि खिचि“दोरहेछ भन्ने कुरा पनि नीलाले आभासकै साहचर्यबाट थाहा पाएकी थिई ।
नारायणघाट पुग्नुअघि पनि राजमार्गका अधिकांश सुन्दर दृश्यहरू भएका ठाउ“हरूमा आभासले नीलाको तस्बिर खिचिर≈यो । नारायणघाटस्थित उसको मौजामा पुग्दा आभासले नीलाका तस्बिर खिचेरै तीनओटा रीलहरू सिद्ध्याइसकेको थियो ।
ड्ढलपूmलका बगै“चाहरूले घेरिएको आभासको खेती निकै मनोरम थियो । मोटरमा चढेर घुम्दा पनि झन्नै तीस मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने उसको मौजा परिसरको क्षेत्रड्ढल कति होला भन्ने अनुमान नीलाले गर्न सकिन । आभासको त्यस मौजाको हेरचाह गर्ने सरयुग भन्ने मानिस रहेछन् । निकै मोटा सरयुग मिजासिला भएकाले नीलालाई पराईपनको अनुभूति पनि हुन पाएन । सरयुगकी स्वास्नी र बुहारीले नीलाको ज्यादै खातिरदारी गरेका थिए । सरयुगका बाजेको पालादेखि नै सरयुगहरूले उनीहरूको यो मौजाको रेखरेख गर्दै आएका रहेछन् । तर सरयुगभन्दापछि अब कसले यहा“को हेरविचार गर्ला भन्ने कुरामा सरयुग चिन्तित रहेछन् । किनभने सरयुगको एकमात्र छोरो रामप्रताप कलेजोको बिमारीले भरखरैमात्र मरेको रहेछ । छोरो बिरामी परेको थाहा पाइसकेपछि पनि नातिको आकाङ्क्षाले दुई वर्षअघि उनीहरूले बुहारी भियभयाएका रहेछन्, तर उनीहरूको इच्छा दैवलाई मन्जुर भएन । अहिले युवती विधवा बुहारीको भविष्यको चिन्ताले समेत उनीहरूलाई गालेको रहेछ ।
तराईवासी मधिसे समुदायका सरयुगको परिवारमा उनीहरूको आÏनो संस्कारका साथसाथै आभासको राणाखानदानको संस्कारको पनि मिसावट भएको रहेछ । “राजालाई गुन्द्रुक मीठो लाग्ने भएकाले यो गु्न्द्रुक रामप्रतापकी आमाले आड्ढै“ बनाएकी हो हजुर †” सरयुगले बेलुकीको खानपिनका बेला भनेका थिए । “खूवै मीठो पनि छ≤ काकीलाई भोलि बिहानको खानामा तामाबोडी पकाउन भन्नुस् है सरयुगकाका ?” गुन्द्रुक र भातको स्वाद लि“दै आभासले भनेको थियो । “बुझ्यौ नीला, मम्मीहजुर स्वर्गे भएपछि मलाई मीठो लाग्ने खानेकुरा यहा“ सरयुगकाकीले मात्रै खुवाउनु हुन्छ ।” आभासले सरयुगको अनुहारमा हेर्दै भनेको थियो । “हजुर, अब यो संसारमा हाम्रो पनि राजाबाहेक को छ र ? आज राजा सवारी भएकाले मात्रै रामप्रतापकी आमा कति दिनपछि भान्साघरमा आएकी हो । नत्र भान्सामा बुहारीले जे बनाई त्यही हो । हाम्रो स्वादको मीठो सबै रामप्रतापले लिएर गइहाल्यो ।” बोल्दाबोल्दै सरयुगको गह भरिएर आएको थियो । “राजा † यो हजुरलाई मीठो लाग्ने कुखुराको भियभया“स ।” त्यसै बेला रामप्रतापकी आमा खानेकुरा लिएर आएकी थिइन् । “काकी पेट भरिइसक्यो, अझै खानेकुरा ल्याउ“दै हुनुहुन्छ ।” आभासले खुसी हु“दै भनेको थियो । हुन पनि खाना अत्यन्तै सुरुचिपूर्ण र सुस्वादु थियो । नीलालाई पनि निकै लामो समयपछि यति स्वादिलो खाना खाएको अनुभूति भएको थियो ।
उनीहरूको खानपिन सरयुगकै घरमा भए पनि सुत्न उनीहरू आÏनै निवासमा पुगेका थिए । सरयुगको घरबाट पैदल हि“ड्दा मुस्किलले पा“च मिनेटको ड्ढरकमा आभासको घर थियो । मान्छे नबसेको त्यो घर पनि सड्ढा सुग्घर र झकिझकाउ थियो । बगै“चामा पनि मौसमअनुसारका पूmलहरू फुलिरहेका थिए । बिजुलीबत्तीको उज्यालोमा बगै“चाको रौनकले घरलाई थप आकर्षक बनाएको देखिन्थ्यो । राम्ररी हेरविचार गरिदिने मानिस भएमा मानिस नै नबसेको घर पनि राम्रो हु“दोरहेछ जस्तो लाग्यो नीलालाई ।
घरबाहिर मात्रै नभएर घरभित्र पनि एकदमै सड्ढासुग्घर, सजिसजाउ र व्यवस्थित देख्दा नीलालाई अचम्म पनि लागेको थियो । आभासको काठमाडौ“ विशालनगरस्थित निवास र यहा“को निवासमा एउटा कुराको चाहि“ गजब समानता थियो । यहा“ पनि त“छाड र मछाड गरिरहेका मूर्ति र पेन्टिङहरू देखिन्थे । आभासले भनेजस्तै अझ काठमाडौ“मा भन्दा धेरै कलाकृति यही“ थिए । सरयुगकाका उनीहरूलाई पु¥याएर ड्ढर्किसकेका थिए । नीला छक्क परेर मूर्ति र पेन्टिङका डङ्गुर हेरिरहेकी थिई । “बुवाहजुर धेरैजसो यसै घरमा राज हुन्थ्यो । विशालनगरमा त्यति मनपराइबक्सन्न थियो । मलाई पनि सानो छ“दा काठमाडौ“ पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । ठूलो स्कुलमा पढाउनका लागि मम्मीहजुर मलाई लिएर काठमाडौ“मै राज भयो । अहिले मलाई खाना पकाएर खुवाउने दलबहादुर दाइले त्यस बेला बुवाहजुरको खानपिन हेर्थे । मम्मीहजुर मलाई होस्टलमा राख्न मन नपराउने, बुवाहजुरलाई काठमाडौ“ बस्न मनै नपर्ने र मेरो शिक्षाका लागि यहा“ राम्रो स्कुल नभएका कारण बुवाहजुर र मम्मीहजुर धेरैजसो अलगअलग्गै बस्नुहुन्थ्यो ।” आभासले आÏनो विगत नीलाका सामु उघार्न खोजेको थियो । “यहा“ यस्तो रमाइलो रहेछ । तिमी किन काठमाडौ“ बसिरहेको होला ?” नीलाले आभासका अनुहारमा हेर्दै भनेकी थिई । “अ“ ऽऽऽऽ हेर न केटाकेटीमा यहा“ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो । हिजोआज यसो कहिलेकाही“ भनेको भिन्नै हो≤ यही“ बस्न त मनै लाग्दैन । काठमाडौ“कै बसाइको बानी परेछ । अनि के त रानी अब यतै बस्ने त ?”
कुराकानी गर्दागर्दै उनीहरू सुत्नेकोठाको ढोकामा पुगिसकेका थिए । “तिमी बसे त म बसिहाल्छु नि † मलाई त सारै रमाइलो लाग्यो ।” नीलाले सुत्ने कोठाभित्र प्रवेश गरेर भनेकी थिई । “तिमी जहा“ म त्यही“, तिमी नभएपछि जस्तै रमाइलो ठाउ“ पनि नरमाइलो हुन्छ ।” आभासले सुत्ने कोठामा भएको भव्य एवम् विशाल पलङमा नीलालाई लडाएर म्वाइ“ खा“दै भनेको थियो । आभासको स्पर्शले रोमाञ्चित भएकी नीलाले केहीअघि मात्रै आभासको यति विघ्न सम्पन्नताका अघि आपूm आर्थिक रूपले पुड्को भएको अनुभूति पनि यस बेला बिर्सेकी थिई ।
“रूपाले यो घर सारै मन पराएकी थिई≤ काठमाडौ“मा छोराछोरीको स्कुल बिदा हुनासाथ ऊ यता आउन कर गर्थी ।” नीलालाई अ“गालोमा बा“धीबा“धी आभासले भनेको थियो । प्रेमपरिणयको संसारमा प्रवेश गर्न लागेकी नीलालाई यस्तो रमाइलो क्षणमा आभासले यसरी रूपाको कुरो उप्काएर वातावरण नै चिस्याएको अनुभूति भएको थियो । “यस्तो ठाउ“मा यस्तो राम्रो घर । बगै“चा कसलाई पो नराम्रो लाग्ला र †” रूपालाई सामान्यीकरण गरेर भए पनि नीलाले आÏनो मनको तुस ड्ढाल्न खोजेकी थिई ।
त्यसपछि यात्राको थकाइसमेतले गर्दा सुन्दर बिछ्यौना देख्नासाथ नीलाका आ“खालाई निद्राले छोप्न खोजेको थियो । हतारहतार शौचालय पसेर मुक्त भएपछि नीला रात्रिपोसाक पहिरिएर बिछ्यौनामा सुती आ“खा चिम्लिएर दिनभरिको थकाइ मार्न खोज्दै थिई । त्यसै बेला भरखरै मात्र बिछ्यौनामा आइपुगेको आभासले नीलाका नजिकमा आएर आÏनो दाहिने हातको चोर औ“लाले नीलाका ओठमा घर्षण गरेको थियो । तर नीलाले आ“खा नखोलेर निदाएकै अभिनय गरिरही । त्यसो त नीलाको निद्रा आभासको स्पर्शले कता हो कता भागेको थियो. ।
केहीछिनअघि मात्रै निद्रा र थकाइले गलेको नीलाको शरीर आभासको स्पर्शले तरोताजा भएर शरीरभरि स्पूmर्ति पनि सञ्चार भइसकेको थियो । भित्रभित्रै काउकुतिएकी नीलाले आ“खा चिम्लीचिम्ली आÏना ओठमा मुस्कान छरेकी थिई । बिस्तारै आ“खा खोलेकी नीलाले आपूmलाई नै एकटकस“ग हेरिरहेका आभासका एकजोडी आ“खालाई पनि झट्टपट्ट आÏनै आ“खामा कैद गरेकी थिई ।
त्यसपछि नवीन परिवेशमा पूर्वमिठासको पुनरावृत्तिको समय उनीहरूमाझ निर्विघ्न बितेको थियो । “आहा जीवन कति रमाइलो हु“दो रहेछ † सुख यसरी मानिसका रौ“का त्यान्द्रात्यान्द्रामा पनि सञ्चारित हुन सक्तो रहेछ ।” त्यस रात आभासको अ“गालोमा निदाउनुअघि नीला यस्तै अनुभूतिहरूले खचाखच भरिएकी थिई ।
Next story तेस्रो दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास)
Previous story पहिलो दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास)